UK tour operator is to become the first to offer trips to the geographic South Pole |
Bogga ugu weyn » Wararka Safarka » Hawlwadeenka socdaalka Boqortooyada Midowday waa inuu noqdaa kii ugu horreeyay ee bixiya safarada juqraafi ahaan Koonfur-bari
Hawlwadeenka socdaalka Boqortooyada Midowday waa inuu noqdaa kii ugu horreeyay ee bixiya safarada juqraafi ahaan Koonfur-bari
(eTN) - South Pole, qofna? Shirkadda socdaalka Ingiriiska ee Discover the World ayaa noqonaysa shirkaddii ugu horreysay ee dalxiis bixisa ee booqashooyin ku bixisa juqraafi ahaan Koonfur-bari, iyadoo qayb ka ah safar sideed maalmood ah oo ku tagaya Antarctic.
Shirkaddu waxay la shaqeyneysaa Adventure Network International (ANI), oo ku leh xero ku taal Patriot Hills - qiyaastii kalabar u dhexeeya McMurdo Sound iyo South Pole lafteeda-waxayna dadka u kaxeyneysay cirifka illaa 1987.
"Ilaa iyo hada Patriot Hills waxaa kaliya soo booqday aqoonyahano, sahamiyayaal, shaqaalaha filimada iyo shaqsiyaad aad u maalqabeen ah oo kusii jeeda Pole," ayay sharaxday Discover the World's Georgina Hancock. "Tani waa sanadkii ugu horeeyey ee ANI ay lashaqeysay shirkad dalxiis, waxayna qaadi doonaan ugu badnaan 44 qof."
Safarka wuxuu ku kici doonaa ku dhowaad ,18,000 XNUMX oo ku saabsan duulimaadka Punta Arenas ee koonfurta Chile si uu ugu xirmo duulimaad afar-saac iyo badh ah oo ku tagaya Patriot Hills, halkaasoo hoy u ah teendhooyin laba jibbaaran iyo goobaha lagu dhaqo oo ka kooban baaquli biyo kulul iyo isbuunyo.
Duulimaadka Pole laftiisa wuxuu qaadanayaa lix saacadood, oo muujinaya aragtida aagga sare ee 'Polar plateau', kalluumeysiga riwaayadaha leh iyo saameynta barafka dabaysha qaboojiyay ee loo yaqaan sastrugi. Rakaabku waxay joogi doonaan illaa afar saacadood juqraafi ahaan Koonfur-90º koonfur, 0º galbeed - waxayna booqdaan Saldhigga Booska ee Amundsen-Scott South.
Waxay awood u yeelan doonaan inay sawirro ka qaadaan halka loo yaqaan 'Pole', waxay booqdaan dukaanka saldhigga waxayna ku dhajinayaan kaararka boostada oo leh calaamadda South Pole ee gaarka ah. Xayawaanka duurjoogta ah ee kaliya ayaa laga yaabaa inay yihiin shimbiraha shimbiruhu ka baxsan yahay. Waxay filan karaan kuleyl la'aan, dabeylo badan, heerkul hooseeya -28C (-20F) iyo joog cadaadis gaaraya ilaa 3,230m (10,600ft).
Wadar ahaan afar duulimaad, oo qaadaya ugu badnaan 11 rakaab ah, ayaa ka tagi doona Patriot Hills bisha Diseembar 2008 iyo Janaayo 2009.
“South Pole Adventure” waxay ku kacaysaa, 17,944 qofkiiba oo ka socda Discover World (01737 218800, www.discover-the-world.co.uk/antarctica). Waxaa ku jira duulimaadyada soo noqda ee u dhexeeya Punta Arenas iyo Patriot Hills, iyo Patriot Hills iyo South Pole iyo hoyga buuxa ee guddiga toddobada habeen teendhooyinka safarka ee Antarctica. Marka laga reebo duulimaadyada caalamiga ah.